काेराेना संक्र`मणबाट पा`ल्पाका ४५ वर्षीय पुरुषकाे नि`धन !!! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/काेराेना संक्र`मणबाट पा`ल्पाका ४५ वर्षीय पुरुषकाे नि`धन !!!
काेराेना संक्र`मणबाट पा`ल्पाका ४५ वर्षीय पुरुषकाे नि`धन !!!
नयाँदिल्ली । दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार भारतमा हालस`म्म २८ जना नेपालीमा कोभिड–१९ को संक्र`मण पु`ष्टि भएको छ भने एक जनाको नि`धन भएको छ । संक्र`मित नेपालीहरु मध्ये २३ जना रोज`गारीका लागि भारतमा बस्दै आएका हुन् भने अन्य पाँच जना केही महिना अघि मात्र भारत आएका थिए ।
संक्र`मित नेपालीहरु मध्ये एक जनाको नि`धन भइ`सकेको छ भने १२ जना उपचार पछि निको भइ`सकेका छन् । बाँकी १५ जनाको उपचार चलिरहेको छ । दूतावासका अनुसार नि`धन हुनेमा हरि`याणा रोहत`कका ४५ वर्षीय पुरुष छन् । पाल्पा घर भएका ती संक्र`मित नेपाली कामकै सिल`सिलामा रोहतकमा बस्दै आएका थिए । सुरेश`राज न्यौपा`नेले का`न्तिपुर दैनिकमा समा`चार लेखेका छन्
पछिल्लो सं`क्र`मण बैतडी, दोगडा केदार गाउँ`पालिकाका २३ वर्षीय पुरुषमा देखिएको छ । ती नेपाली एसियाकै सबै`भन्दा ठूलो तर`कारी तथा फलफूल बजार मानिने आजाद`पुर तरकारी बजारको एउटा फल`फूल पस`लमा काम गर्दै आएका थिए । उक्त बजारमा सुदूर`पश्चिमका थुप्रै युवाहरु काम गर्ने गर्छन् ।
साथै मुम्बईकै दानावरमा बस्ने अर्का एक ५७ वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना भा`इरसको पोजिटिभ देखिएको छ । उनको पनि स्थानीय उपचार भइर`हेको बताइएको छ ।म`हा`राष्ट्रकै अर्को सहर पुनेमा बस्दै आएको अछा`मको एकै परिवारको तीन जना संक्र`मित भएका छन् । २८ वर्षीय घरमूली, उनकी २२ वर्षीय श्रीमती र ५ महि`नाका छोरामा भाइ`रसको देखिएको हो ।